Cách nấu nước đường làm bánh trung thu "Bất Bại" cực chuẩn | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Cách nấu nước đường làm bánh trung thu “Bất Bại” cực chuẩn | Muasalebang in Muasalebang
Amanzi kashukela ayisithako esibalulekile sokusiza uqweqwe lwe-mooncake lube thambile, lube luhle futhi lube mnandi kakhulu. Ake siye ekhishini no-Nguyen Kim ukuze sifunde ngokushesha ukupheka amanzi ashukela ukwenza ama-mooncake “angahluliwe” kanye “asezingeni eliphakeme kakhulu” ekhaya!
1 Ukusetshenziswa kwamanzi ashukela ukwenza amaqebelengwane enyanga abhakiwe
2 Ungazilungiselela kanjani izithako zokupheka amanzi ashukela “okusezingeni eliphakeme kakhulu”
2.1 1. Khetha umzila
2.2 2. Ulamula
2.3 3. I-Malt
2.4 4. Amanzi e-lye
3 Iziqondiso zendlela yokupheka amanzi ashukela ukwenza ama-mooncake abe nombala ojwayelekile
3.1 Izithako: Iresiphi yokupheka kusuka ku-1 – 1.2kg wamanzi anoshukela:
3.2 Izinyathelo ezinemininingwane ukupheka amanzi anoshukela
3.3 Amanye amanothi okufanele uwakhumbule lapho upheka amanzi ashukela:
3.4 Indlela yokubona amanzi ashukela ukwenza amaqebelengwane enyanga ajwayelekile
4 Ezinye izinkinga lapho upheka amanzi ashukela ukwenza amaqebelengwane enyanga nendlela yokuwaxazulula
4.1 Ukupheka amanzi ashukela ukubhaka ama-mooncakes kusele noshukela
4.2 Amanzi ashukela emva kokupheka, ake apholile ukuze aqine
5 Eminye imibuzo lapho upheka amanzi ashukela ukwenza amaqebelengwane enyanga ekhaya
5.1 Amanzi ashukela enza ama-mooncakes ahlala isikhathi esingakanani?
5.2 Kufanele ngipheke isikhathi esingakanani ushukela ngaphambi kwesikhathi uma ngifuna ukwenza ama-mooncake ekhaya?
5.3 Ingabe kufanele ngipheke amanzi anoshukela ekhaya noma ngisebenzise amanzi anoshukela athengiswayo?
Ukusetshenziswa kwamanzi ashukela ukwenza amaqebelengwane enyanga abhakiwe
Amanzi kashukela we-mooncakes abhekwa njengesithako esibaluleke kakhulu kuqweqwe lwekhekhe. Ngoba amanzi ashukela awagcini nje ngokunquma ubumnandi be-mooncake crust, kodwa futhi ayasiza yenza i-mooncake crust inokuthamba, umbala odonsa amehlo nempilo ende yeshelufu yamakhekhe.
Ngokuvamile, abantu bavame ukwenza amanzi ashukela amaqebelengwane enyanga abhakiwe kusenesikhathi. Ngenxa yokuthi amanzi ashukela ashiywe isikhathi eside, azoba mnyama, aminyene futhi acebe. Ngakho-ke, amanzi ashukela ekhekhe lenyanga yesikhathi eside azosiza uqweqwe ukuba luthambile futhi lube nombala onsundu wegolide okhangayo.
Ungazilungiselela kanjani izithako zokupheka amanzi ashukela “okusezingeni eliphakeme kakhulu”
Izithako eziyisisekelo ezisetshenziselwa ukupheka amanzi ashukela yenza amaqebelengwane enyanga Iqukethe ushukela, amanzi kanye nolamula kuphela. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukwengeza i-malt nejusi yomlotha ohlwini lwezithako zamanzi ashukela! Futhi nakhu okunye okuhlangenwe nakho okufanele ukwazi ekulungiseleleni izithako zokupheka ushukela wekhekhe “ongenakunqotshwa” kulesi senzakalo. Umkhosi Wamaphakathi Nekwindla lokhu.
1. Khetha umzila
Izithako zokwenza amanzi ashukela amaqebelengwane enyanga zihluke kakhulu. Ungasebenzisa ushukela omhlophe, ushukela onsundu noma ushukela ophuzi. Kodwa-ke, i-jaggery akufanele isetshenziswe ngoba ukunambitheka koshukela kuvame ukugxila kakhulu. Kwesinye isikhathi, i-jaggery izokweqa ukunambitheka kwama-mooncakes.
Uma ungenaso isikhathi esiningi, ushukela onsundu noma ushukela onsundu kuzoba yisinqumo esihle. Ngenxa yokuthi azosiza isiraphu kashukela ukuba ibe mnyama ngokushesha, ama-mooncake abhakiwe azoba nombala omuhle kakhulu wegolide onsundu.
Ngaphezu kwalokho, kufanele ukhethe ukuthenga ushukela ocolile ngokuhlanzeka okuphezulu nokuhlanzeka, ngakho-ke lapho upheka, kuzonciphisa i-foam nokungcola okuyingozi empilweni. Ngesikhathi esifanayo, amanzi ashukela asetshenziselwa ukwenza amaqebelengwane enyanga azobe ecacile futhi emuhle kakhulu.
Ijusi kalamula noma uphayinaphu uzosiza ukulungisa isimo sikashukela. Okusho ukuthi, ushukela awufingqwa ube yizinhlayiya ezincane emanzini ashukela emva kwesikhathi ngasinye sokupheka. Ngaphezu kwalokho, lezi zithelo ezimbili zisiza futhi amanzi ashukela abe nokunambitheka okupholile. Ngakho-ke, igobolondo lekhekhe lenyanga libuye libe nephunga elimnandi, elimnandi kakhulu.
Ukuze uthole ulamula, ungasebenzisa ulamula ophuzi noma oluhlaza. Qaphela ukuthi ungakhami ijusi eduze kakhulu nekhasi, kuzokwenza amanzi ashukela abe ababa. Kodwa-ke, ukwenza amanzi ashukela abe mnandi futhi abe masha, kufanele ubeke kuqala ukusebenzisa ulamula ophuzi!.
I-malt esetshenziselwa ukwenza isiraphu kashukela we-mooncake iyi-malt emhlophe ekhanyayo noma ephuzi ephuzi, enoketshezi olubonakala kancane kanye nobumnandi obumaphakathi. Nakanjani ungasebenzisi i-malt yeswidi enamathelayo ephuzi ukupheka amanzi anoshukela ngoba ingabangela ukuthi ushukela ubuye.
I-malt isiza amanzi ashukela enze ama-mooncake athambe futhi abonakale. Nokho, ungakwazi futhi ukweqa lesi sithako uma ungakwazi ukusithola esilungile noma ungenaso ekhaya!
4. Amanzi e-lye
Amanzi omlotha wamaShayina asiza ukuthambisa amanzi anoshukela, ngakho asiza noqweqwe lwekhekhe lenyanga ukuthi luthambe futhi lube nombala onsundu osagolide. Emakethe, kunezinhlobo ezi-2 ezidumile zamanzi omlotha womkhumbi:
Amanzi omlotha womkhumbi wemvelo: Ingxenye yomlotha emanzini iphekwe ngotshani bemvelo.
Amanzi omlotha womkhumbi wezimboni: eyenziwe ngomlotha kanye nezinhlobonhlobo zezinye izithako ezilondolozayo.
Ukusetshenziswa kwamanzi omlotha wemikhumbi yezimboni kuzoba yingozi kakhulu empilweni yabasebenzisi. Futhi uma ungakwazi ukuthola umlotha wemvelo, ungakwazi ukweqa lesi sithako ngaphandle kokuthinta ikhwalithi yamanzi ashukela kanye nobuhle bekhekhe.
Iziqondiso zendlela yokupheka amanzi ashukela ukwenza ama-mooncake abe nombala ojwayelekile
Izithako: Iresiphi yokupheka kusuka ku-1 – 1.2kg wamanzi anoshukela:
I-1kg kashukela enesilinganiso sika-50% ushukela omhlophe oyi-granulated: 50% ushukela onsundu.
1 ulamula ophuzi (unesisindo esingama-60g-70g).
600ml amanzi ahlungiwe.
20 ml we-malt (uma uthanda).
5ml amanzi omlotha wemvelo (uyazikhethela).
Izinyathelo ezinemininingwane ukupheka amanzi anoshukela
Isinyathelo 1. Geza ilamula, uyinqume ngesigamu ngommese, susa imbewu bese ucindezela ijusi. Qaphela ukuthi ungawakhama ikhasi ukuze ugweme ijusi elibabayo futhi kufanele ugcine ikhasi lemon ngemva kokulicindezela.
Isinyathelo sesi-2. Thela ushukela omhlophe noshukela onsundu epanini, uhlanganise kahle nesipuni. Letha amanzi emathunjini, vala ukushisa bese uthela la manzi abilayo epanini elinoshukela. Bese, sebenzisa i-spoon ukuze ugovuze ngobumnene, ngokulinganayo, kuze kube yilapho ushukela uhlakazeka.
Isinyathelo sesi-3. Beka ibhodwe esitofini, uvule ukushisa ukuze uqhubeke ubilisa amanzi anoshukela. Lapho amanzi anoshukela eqala ukubila, yehlisa ukushisa okwanele ukuze amanzi abile. Uma ingaphezulu lamanzi anoshukela linegwebu, sebenzisa isihlungi samafutha ukuze ususe igwebu.
Isinyathelo sesi-4. Engeza ijusi kalamula bese ucindezela i-lemon zest emanzini anoshukela. Qhubeka ubilisa ingxube yamanzi kashukela ekushiseni okuphansi imizuzu engu-50-65.
Isinyathelo sesi-5. Lapho amanzi ashukela ephekwe cishe imizuzu engama-35-40, zama ukuhlola ukuthi amanzi ashukela afinyelele izinga noma cha. Uma amanzi anoshukela esemancane, qhubeka upheka, uma eshubile, engeza amanzi bese upheka kuze kube yilapho usuqedile.
Isinyathelo sesi-6. Uma sekuvuthiwe, cisha ukushisa, sebenzisa i-rack ukukhipha ikhasi likalamula bese uvumela amanzi ashukela ukuthi aphole. Lapho amanzi ashukela ecishe esepholile, sebenzisa i-ladle ukukha isipuni ngasinye bese usifaka embizeni yengilazi.
Isinyathelo sesi-7. Vumela amanzi ashukela embizeni yengilazi aphole ngokuphelele, bese uvala isivalo. Ngemva kweviki eli-1, ungasebenzisa leli nani lamanzi anoshukela.
Amanye amanothi okufanele uwakhumbule lapho upheka amanzi ashukela:
Ukupheka amanzi ashukela ukwenza amaqebelengwane enyanga ajwayelekile, udinga ukwazi kahle amanothi amancane alandelayo:
Lapho ubeka ibhodwe lamanzi anoshukela esitofini, unganyakazi nhlobo (ngisho noma ufaka ulamula) ukuze ugweme isimo soshukela osele.
Uma usebenzisa amanzi amaningi emalithi nomlotha ukupheka amanzi anoshukela, lezi zithako ezimbili kufanele zifakwe ebhodweni lamanzi anoshukela cishe imizuzu engu-30 ngemva kwesikhathi sokwengeza ulamula.
Uma upheka, ungasebenzisa noma ungasebenzisi ithawula elihlanzekile ukuze usule izinhlayiya zikashukela ebhodweni. Uma uyisebenzisa, udinga ukuyisula ngokucophelela ukuze ugweme izinhlayiya zikashukela ezibuyela ebhodweni!.
Uma ufaka amanzi ashukela embizeni yengilazi, ungawatheli ngoba izinhlayiya zikashukela odongeni lwebhodwe zizokhukhulela embizeni futhi zibangele ukuthi ushukela ubuye.
Izimbiza zengilazi kufanele zisetshenziselwe ukugcina amanzi anoshukela futhi kufanele zihlanzwe ngamanzi abilayo bese zikhanywa kahle ngaphambi kokufaka amanzi anoshukela. Lokhu kusiza amanzi anoshukela ukuthi angonakali uma eshiywe isikhathi eside kanjalo nokuqinisekisa ukuthi ephephile empilweni.
Amanzi ashukela okupheka ajwayelekile azoba nombala omuhle omnyama ophuzi noma onsundu wamaphiko ephela. Futhi ufinyelele ukuvumelana okulungile, hhayi mncane kakhulu noma ugqinsi kakhulu.
Indlela yokubona amanzi ashukela ukwenza amaqebelengwane enyanga ajwayelekile
Nazi izindlela ezi-3 ezilula zokukusiza ukuthi ubone kalula ukuthi amanzi ashukela ajwayelekile noma cha:
Indlela 1: Usebenzisa ipuleti eliyisicaba, khaza amanzi anoshukela bese ubeka amaconsi ambalwa ngaphezulu. Uma amanzi ashukela esakazeka ngokushesha, isikhathi sokupheka asanele, uma amanzi ashukela ekoma ngokushesha, kungenxa yokupheka isikhathi eside. Lapho amanzi ashukela ephekwe ngokwezinga, lapho econsa, amaconsi kashukela asazogcina isimo sawo esiyindilinga ngisho noma sisakazeka kancane emizuzwaneni yokuqala engu-1-2.
Indlela 2: Lungisa 1 inkomishi encane yamanzi bese wengeza amaconsi ambalwa amanzi anoshukela enkomishini. Uma ushukela wehla ngokushesha futhi uhlakaze emanzini, ukupheka akwanele. Uma amaconsi kashukela eqoqa amabhola ayindilinga emanzini, kungenxa yokupheka isikhathi eside kakhulu. Amanzi aphekiwe anoshukela azocwila futhi asakazeke enze indilinga phansi kwenkomishi.
Indlela 3: Ngokusekelwe esisindweni samanzi ashukela emva kokupheka. Qala ukale ibhodwe ngaphambi kokupheka nangemuva kokupheka. Bese, thatha isisindo sebhodwe lamanzi anoshukela emva kokupheka susa isisindo sokuqala uma kusele cishe u-1kg – 1.2kg.
Ezinye izinkinga lapho upheka amanzi ashukela ukwenza amaqebelengwane enyanga nendlela yokuwaxazulula
Ukupheka amanzi ashukela ukubhaka ama-mooncakes kusele noshukela
Amanzi ashukela anoshukela emuva angamanzi anoshukela anongqimba lwezinhlayiya zikashukela omhlophe phansi ebhodleleni ngendlela yama-granules amancane. Indlela yokuphatha amanzi anoshukela ngoshukela: Buyisela amanzi anoshukela ebhodweni. Faka amanzi kanye nejusi kalamula bese upheka futhi.
Amanzi ashukela emva kokupheka, ake apholile ukuze aqine
Lesi simo sivame ukwenzeka lapho amanzi ashukela ephekwe isikhathi eside kakhulu. Ungakwazi ukucwilisa imbiza yamanzi ashukela emanzini afudumele ukuze uvumele izinga lokushisa lincibilike futhi ukhulule ushukela ngaphakathi. Bese, engeza amanzi ashisayo amancane emanzini anoshukela bese uwathela epanini ukuze upheke futhi.
Ngethemba ngendlela yokupheka amanzi ashukela ukwenza ama-mooncake “angenakunqotshwa” esihlokweni esingenhla, kuzokusiza ukuthi udale ngempumelelo ama-batches amahle futhi amnandi ama-mooncakes khona kanye ekhaya!
Eminye imibuzo lapho upheka amanzi ashukela ukwenza amaqebelengwane enyanga ekhaya
Amanzi ashukela enza ama-mooncakes ahlala isikhathi esingakanani?
Sawubona, Uma ikhekhe libhakwa isikhathi eside, kuzoba ngcono ukwenza amaqebelengwane enyanga. Kodwa-ke, lapho uhlola, uma kunephunga elingavamile noma umbala, ukuze uphephe, kufanele ulahle futhi upheke elinye iqoqo lamanzi anoshukela!
Kufanele ngipheke isikhathi esingakanani ushukela ngaphambi kwesikhathi uma ngifuna ukwenza ama-mooncake ekhaya?
Sawubona, njengemiyalelo esihlokweni, ukupheka amanzi ashukela kulula futhi akuthathi isikhathi esiningi. Amanzi anoshukela aphekwe ekhaya ahlanzekile futhi amnandi, awekho ngaphansi kwamanzi ashukela atholakala ngokudayiswa.
Ingabe kufanele ngipheke amanzi anoshukela ekhaya noma ngisebenzise amanzi anoshukela athengiswayo?
Sawubona, abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuze uthole amanzi ashukela angcono kakhulu, kufanele upheke amanzi ashukela kusukela ezinyangeni ezimbalwa kuya ngonyaka kusengaphambili. Kodwa uma ungenaso isikhathi esiningi esijwayelekile, usengasebenzisa amanzi ashukela asanda kuphekwa cishe izinsuku eziyi-10-14. Qinisekisa ukuthi la manzi kashukela wekhekhe asasiza uqweqwe lwe-mooncake ukuthi luthambile futhi lube nombala ofanele!